Fanontaniana & Valiny niarahana tamin’i Silvia Cebolla, mpikatroka ho an’ny fiteny Aragonezy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2022 7:55 GMT
Saripika natolotr'i Silvia Cebolla. Fampiasàna nahazoana alàlana
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ety anaty habaka nomerika ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra aty anaty habaka nomerika ireo fiteny eorôpeàna sy fitenim-paritra vitsy an'isa, tianay ny hanasongadina an'i Silvia Cebolla (@silviacebolla) izay miasa hampiroborobo ny fiteny Aragonezy amin'ny alàlan'ireo fandaharana feno fahaizamamorona alefa onjampeo sy ety anaty tambajotra.
Raha niverina nahazo aina vao indray ilay fiteny any anatin'ireo tenimparitra maro avy aminy, ny Birao Foiben'ny Politikan'ny Fiteny ao Aragón, Espaina kosa maminavina fa teo anelanelan'ny 10.000 sy 12.000 teo monja ireo mpiteny mavitrika ny Aragonezy, izay manome eo ho eo amin'ny 1% amin'ny olona ao anatin'ilay vondrompiarahamonina. Na izany aza, efa lasa miha-mahazatra ny mahita ireo ezaka fanentanana sy ny fanomezana sehatra bebe kokoa azy, ohatra, noho ny asan'i Silvia izay sady mampiasa ny medià nahazatra, no mampiasa ny ety anaty tambajotra mba hampiroboroboana ilay fiteny.
Fantaro misimisy kokoa ao anatin'ity antsafa natao tamin'ny alàlan'ny imailaka notontosain'ny Rising Voices ity ny mikasika ireny hetsika ireny.
Silvia Cebolla (SC): Manana diplaoma lisansa amin'ny lalàna aho, sy maîtrise amin'ny fifandraisana miralenta, saingy hatramin'ny fahatanoràko, ny tena zavatra tiako dia ny mianatra sy ny mizara ny fiteny aragônezy. Avy any Zaragoza aho, araka izany dia tsy fitenin-dreniko ny Aragonezy, mpiteny vaovao aho. Tany an-tsekoly antsoina hoe Nogará tao Zaragoza aho no nianatra ilay fiteny.
Tamin'ny 2010, nanomboka fandraharahàna iray tamin'ny sehatry ny hôtely aho, ka tao dia ny fiteny aragonezy no tariby mpampita aratra, ary taty aoriana dia nanapaka hevitra aho ny hanao dingana ho ao amin'ny Youtube, niaraka tamin'ny fantsona iray fikarakaràna nahandro “vegan”, natao manontolo tamin'ny fiteny Aragonezy.
Nanomboka teo, nanomboka nizara votoaty teny anatin'ireo tambajotrako aho, tamin'ny fiteny aragonezy. Tamin'ny 2019, nanomboka nanolotra ny fandaharana antsoina hoe Charrín-Charrán, izay fandaharana voalohany tamin'ny fiteny aragonezy tao amin'ny fahitalavitra Aragón.
Lahatsary fampahafantarana ny fandaharana
RV: Manao ahoana ny toerana misy ny fiteninao ankehitriny, anatiny sy ivelan'ny aterineto?
SC: Ratsiratsy ihany ny toedraharaha ho an'ny fiteny aragonezy amin'izao fotoana izao noho ny isan'ireo mpiteny azy tena nidina be tokoa, arahan'ny tsy fisiana mibaribary ny fampitàna azy amin'ny taranaka. Nefa tato anatin'ny taona vitsivitsy, nisy fahalinana be tamin'ny famelomana azy indray naterak'ireo taona marobe nanaovana fikatrohana nataon'ireo fikambanana sy ireo vondrona manokan-tena hampiroborobo ny fiteny. Io fahalianana nitombo io dia hita ihany koa noho ny fisian'ireo tambajotra sôsialy izay fitaovana tsy azo ialàna ho an'ny fahitàna ny fiteny iray.
BG: Izaho mino fa tena manana anjara toerana goavana be amin'ny fanelezana azy ireo media sôsialy, amin'ny famelàna antsika hanatratra ireo tanora sy ireo sarangam-piarahamonina sôsialy tsy afaka nidirana tany aloha tany. Izy ireny dia mamela antsika ihany koa hampiasa karazana fifandraisana hafa, fiteny, ary votoaty izay mitondra fijery hafa an'ilay fiteny. Ankehitriny, mba hanomezana aina vao ireo fiteny vitsy an'isa dia fitaovana iray tena lafatra ireo habaka nomerika .
Ny fantsona “vegan” an'i Silvia, amin'ny fiteny aragonezy
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninareo tsy ho ampiasaina feno ety amin'ny aterineto.
SC: Iray amin'ireo fanamby goavana ho an'ny fiteny aragonezy dia, satria tsy mahazo fankatoavana ho toy ny fiteny ôfisialy izy, ny fanilikilihana azy tsy ho anatin'ireo lohamilina goavana fanaovana fikarohana sy ireo loharano ety anaty aterineto. Kanefa, misy amin'izao fotoana izao ireo mpikatroka marobe ho an'ny fiteny aragonezy izay manokan-tena mikaroka ireo rindrambaiko tsy andoavana vola sy ireo karazana loharano hafa.
KS: Inona no heverinao ho dingana mivaingana azo atao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteninareo na hampiasa azy?
SC: Mety ho tena zavadehibe mihitsy ny fahitàna misimisy kokoa ny fiteny aragonezy eny anatin'ny tontolon'ny sekoly, tsy toy izay hita ankehitriny, izay ireo taranja na ivontoerana manokana ihany no misy. Fepetra iray hafa mety hahaliana ny famoronan'ireo toeram-pianarana votoaty mahasarika ny tanora amin'io fiteny io, toy ny podcasts, sariitatra, tantara foronina, sns…